Rasaasa News – Sharciga Qaybinta iyo Isticmaalka Dhulka Miyiga ah
on February 2, 2012 12:00 am
Jijiga, Feb 2, 2012 [ras] – Qoraal xeer qabyo ah oo ku saabsan qaybinta dhulka miyiga ah iyo isticmaalkiisa ayay hirgalintiisu wadada ku soo jira, sida uu sheegay wasiirka xoolaha, beeraha iyo horumarinta dawlada degaaka Somalida Dr. Cabdiqadir Iimaan.
Xarunta shirarka Sayyid Maxamed Cabdille Xasan waxaa shalay lagu qabtay kulan balaadhan oo ku saabsan sidii loo hirgalin lahaa sharciga qaybinta iyo isticmaalka dhulka miyiga ah.
Shirka waxaa ka qayb galay wasiirada heer degaan iyo madax xafiiseedayada maamulada kala duwan ee degaanka Somalida Ethiopia, masuuliyiinta ayaa laga filayaa in ay daraasad ku samayn doonaan sharciga qabyada ah inta uusan dhaqan galin.
Waxaa shirka ka hadlay wasiirka xoolaha, beeraha iyo horumarinta ayaa faahfaahiyey u jeedada shirka isaga oo carabka ku adkeeyey in dhulka ay dawladu leedahay farsamayntiisana ay masuul ka tahay.
Wasiirka ayaa sheegay in degaanka Somalidu yahay degaanka 2aad ee ugu balaadhan degaanada dalka Ethiopia yahayna baaxadiisuna tahay 3500KMsq, degaanka Oromada ayaa ka badan qiyaas ah 3000KMsq.
Wasiirka ayaa sheegay in dhulka loo qaybin doono muwaadiniinta iyada oo la marayo sharciga. Dhulka waxaa loo qaybin doonaa beeraleyda iyo xoolo dhaqatada. Ruux walba oo gaadha 18 jir waxaa uu xaq u leeyahay dhul uu beerto oo ku filan lab iyo dhadigba.
Wasiirka oo si cilmiyeysan oo taxadar leh u shrxayey sharcigan wadada ku soo jira ayaa ka codsaday ka qayb galayaasha in ay si hufan ay uga doodaan masuuliyiintu sharcigan cusub.
Waxaa kale oo ka halay wasiir ku xigeenka wasaarada beeraha Cabdiqadir Maxamed Faarax oo isaguna sharxay sababta keentay in la keeno sharcigan. Dadkeena 85% waa xoolo dhaqato, waxaana loo baahan yahay in loo sameeyo dadka xoola dhaqatada hanaan nololeed oo la jaan qaadi karta isbadalka cimilada aduunka. Wasiirka ayaa sheegay in sharcigani uu dawayn doono dhibaatadii ay abaarahu u keeni jireen xoolo dhaqatada.
Degaanka Somalida oo ay hore uga maqnayd nidaamka dawladnimada ayaa qaadaya talaabooyin cad cad oo dawladnimo kuwaas oo fulintooda ay runtii su,aalo badan ka iman doonaan ayaa u baahan in si aqoon ku dheehantahay looga dhaadhiciyo bulshada degaanka Somalida Ethiopia inta uusan dhaqan galin shuruucda cusub ee dawladnimadu.
Su,aalha ka iman kara sharciga cusub ee isticmaalka dhulka ayaa noqon, yaa dawlada siiyey dhulkanaga? maxay noogu qaybin wuuba noo qaybsan yahay? iyo jawaab ah waxay rabtaa dawladu in ay dhulka siiso dad kale.
In kasta oo wasiirku sheegay in sharcigani socday mudo saddex sano ah,hadana waxaad moodaa in uu dhagaha dadweynaha ku cusub yahay.
Sharci samaynta iyo doodiisa waxaa mudnaanta leh dad takhasusu leh oo laga dhax xulo xubnaha baarlamaanka dawlada degaanka Somalida Ethiopia.
Si kastaba ha ahaatee waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo xeerar la socon kara isbadalka nolosha iyo dawladnimada degaanka Somalida si loo gaadho horumar nololeed.